Crunched waa kulan khadka tooska ah iyo bandhig soo bandhigid loogu talagalay iibka. Tartanka tooska ah ee dadka waawayn sida WebEx iyo GotoMeeting, Crunched ayaa fududeeyay nidaamka iyadoo la helayo nidaam diiradda saaraya kulanka, la socoshada iyo wadaagista feylka, soo bandhigida ama shaashaddaada iyadoo loo marayo bogga internetka. Ma jiro barnaamij loogu talagalay qofkasta inuu soo dejiyo oo uu dejiyo… uun buu ku kulmi karaa oo tagayaa goobta kulanka loogu talagalay! Crunched waxay bixisaa sifooyinka soo socda ee muhiimka ah: La Kulan - Bilow shirarka webka la'aanteed
Waxaan galay dambi ah inaan burburiyo Soosaarida halkan Indiana sida ugu badan ee ninka xiga. Markaan ka fikiro shaqo soo saarid, waxaan sawiraa nin labbisan oo qabanaya qaar ka mid ah khadadka isku-soo-saarka waxsoosaarka shaqada oo marar badan. Aragtidayda ayaa laga yaabaa inaysan ka duwaneyn dhalinyarada maalmahan, in kastoo. Soo-saarka iyo saadka xitaa ereyo xiiso leh ma ahan. Waa duqoobeen. Way caajis yihiin. Way adag tahay in si kale loo sawiro! Runtu waxay tahay in waxsoosaarka iyo saadku ay yihiin wax uun laakiin